Ulungelelwano Inkcazo yobuKristu
Yintoni Ukulungiswa KubuKristu?
Ukulungiswa kuthetha ukusetha into ethile ngokufanelekileyo, okanye ukuvakalisa ilungisa. Ngolwimi lwangaphambili, ukulungiswa kwakusisigxina sesigxina esichaza "ukuhlawulelwa," okanye ukuchasene "nokugwetywa."
EbuKristwini, uYesu Kristu , umnikelo ongenasono, ogqibeleleyo, wafa endaweni yethu , ethatha isigwebo esifanelekileyo ngenxa yezono zethu . Ngako oko, aboni abakholelwa kuKristu njengoMsindisi wabo balungiswa nguThixo uBawo .
Ukuqinisekiswa ngumsebenzi wejaji. Isenzo esingokomthetho sithetha ukuba ubulungisa bukaKristu bubekwe uphawu, okanye lukhishwe ngamakholwa. Enye indlela yokuqonda ukulungiswa yinto yesigwebo sikaThixo apho echaza umntu ukuba abe nolwalamano olufanelekileyo naye. Aboni bangena emnqophiso omtsha kunye noThixo ngokuxolelwa kwezono .
Isicwangciso sikaThixo sokusindiswa siquka ukuxolelwa, oko kuthetha ukuthatha izono zeenkolelo. Ukulungiswa kuthetha ukunyusa ukulunga kukaKristu kumakholwa.
I-Easton's Bible Dictionary ichaza kwakhona: "Ukongezelela ekuxolelweni kwesono, ukulungiswa kukuthi zonke izibango zomthetho zanelisekile ngokubhekiselele kumgwebo. okanye ukubekwa eceleni, kodwa kubhengezwa ukuba kuzaliseke ngokugqithiseleyo; ngoko ke umntu ochanekileyo uvakaliswe ukuba unelungelo kuwo onke amanzuzo kunye nemivuzo evela ekuthobeleni ngokupheleleyo umthetho. "
Umpostile uPawulos uthi ngokuphindaphindiweyo ukuba umntu akavumelekanga ngokugcina umthetho ( ukusebenza ), kodwa kunokholo kuYesu Kristu . Imfundiso yakhe ekugwetyweni ngokholo kuKristu yaba sisiseko semfundiso yeProtestanti ekhokelwa ngabantu abanjengoMartin Luther , Ulrich Zwingli noJohn Calvin .
Iimfundiso zeBhayibhile malunga nokulungiswa
Kuye wonke umntu okholwayo ulungelelaniswa nayo yonke into ongeke ulungiswe kuyo ngumthetho kaMoses.
Roma 4: 23-25
Kwaye xa uThixo embala njengelungileyo, kwakungekho nje uAbraham inzuzo. Kwakubhalwa ngenzuzo yethu, kwakhona, ukuqinisekisa ukuba uThixo uya kubalelwa ukuba silungile ukuba sikholelwa kuye, lowo wamvusa uYesu iNkosi yethu kwabafileyo. Wanikelwa ukuba afe ngenxa yezono zethu, waza wavuswa ebomini ukuze asenze sikwazi uThixo. ( NLT )
KwabaseRoma 5: 9
Ekubeni ngoku siye sachaneka ngegazi layo, singakanani na esiya kusindiswa kwiqumbo likaThixo ngaye! (NIV)
Ngenxa yoko, njengetyala elinye laholela ekugwetyweni kubo bonke abantu, ngoko isenzo esinye sokulunga sikhombisa ukulungiswa kunye nobomi kubo bonke abantu. ( ESV )
1 kwabaseKorinte 6:11
Kwaye abanye benu bekunjalo. Kodwa nihlambulukile, ncweliswa, nilungiswa egameni leNkosi uYesu Kristu nangomoya kaMoya wethu uThixo. (NIV)
Ngoko umthetho wawubekwa uxanduva lokusikhokela kuKristu ukuze sibe nolungelo ngokholo. (NIV)
Ukubhengezwa : i-KAY i-shun
Ndiyakwenza ibango lilungiswe kuThixo kuphela ngokholo kuYesu, kungekhona kwimisebenzi emihle endiyenzayo.
Clichés AmaKristu athi
Yintoni Umzimba KaKristu?
Iingoma ezi-100 eziphambili zeePop zee-2000s
Bhiyozela utyalo lweSwitzerland eBeltane
I-Isomer Isomfa Inkcazo (i-Cis-Trans Isomers)
Thandaza kuSanta Gerard Ukuba Unethemba Lokufumana Umntwana
Ukuqonda iNgongoma yeZibonelelo kwiNcwadi